Iimpawu ezi-7 zomSebenzi weNtlalo | Martech Zone
Iimpawu ezi-7 zoMqeshwa weNtlalo
NgoLwesithathu, Novemba 6, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
NgoMvulo, sabelane nge-infographic evela kwiNtengiso ye-Blue Focus, Ibhranti yakho njengePlanethiUkubonelela ngobungqina kunye nokufaniswa okulula okuthetha ngamandla okusebenzisa abasebenzi bakho ukukunceda ukuba ukhule kwimithombo yeendaba zentlalo. Iya ngaphaya kokubonisa uphawu lwakho, nangona, njengoko uza kubona kwi-infographic yabo entsha.
Njengoko sichaza kwincwadi yethu ethengisa kakhulu eAmazon, Umqeshwa wezeNtlalontle: Zingaphi iiNkampani eziNkulu ezenza ukuba iMithombo yeendaba yeNtlalo isebenze, akunakubakho mpazamo ukuba ubudlelwane beempawu kubathengi kunye nakubasebenzi babo bayatshintsha. Kwi-bazaar yedijithali, ilizwi eliyinyani lomqeshwa wentlalontle linokuba yeyona nto iphambili kwintengiso ekwakheni ixesha elide, ubudlelwane obunamandla kunye nabathengi kunye namanye amalungu abalulekileyo oluntu kwi-Intanethi.
Ukubandakanyeka kwabasebenzi, ukubandakanywa kwabo emsebenzini wabo kwimidiya yoluntu, ukuzibophelela kwabo kwinkampani, ukukwazi kwabo ukusebenzisana, izakhono zabo zokumamela, izakhono zabathengi babo kunye nokukwazi kwabo ukuphembelela utshintsho kumbutho zizinto zonke zomsebenzi wentlalontle omangalisayo. Ngoku konke okufuneka ukwenze kukuzifumana!
tags: Ukuthengisa okuluhlaza okwesibhakabhakaUmsebenzi wentlaloincwadi yomsebenzi wezentlaloUmsebenzi wentlalo
Izixhobo eziyimfihlo zokuThengisa okungcono kunye nokuThengisa
Ingxelo yeSoDA ka-2013-Umqulu 2